Maxaad ku qiimeysaa horumarka? ||Tukesomalism.com |
Dhaqaalaha & SiyaasaddaGanacsiga iyo DunidaHorumarka & Deegaanka ---OLDMaqal & Muuqaal
Duniddaan ayaa ah dunni aadanaha ay u wada simanyihiin markaad fiiriso xagga maskaxda. Gumeysi iyo in dadka dhaqankooda iyo diintooda la bedelo waxaa keeno in aadanahaas uusan noqonin mid fakara oo isticmaallo maskaxdooda. Hadaba ma in warshado waaweyn la sameysto oo xagga teknoolijiyada laga horumaro ayay dunidda intiisa badan u taqanaa horumarka?
Horumarka maxaad ku qiimeysaa adiga naftaada bal isweydii aqristoow? Inuu horumar jiro maxaad ku qiimeysaa? Caalamka waxaa la isla gartay in horumarka saxda ah ay tahay in marka horre maskaxda laga horumaro. Bulshada haddii aysan ka horumarin xagga maskaxda waxaa adkaani karayso inay horumariyaan dalkooda iyo dadkooda. Tusaallaha ugu wanaagsan ayaa ah Soomaaliya maanta la joogo waxaa la yiraahdaa waxaa loo tilaabsaday horumar xagga amniga ah, laakiin dadka qaar ay ku tilmaameen inaysan midaas horumar ahayn. Dalkaan wuxuu muddo ku soo jiray dagaal sokeeyay, gaajo, qab-qablayaal dagaal, abaar, dalkii oo qeyraadkiisa la iska rarto iyo wadamada deriska ah oo soo hunguriyeyso Soomaaliya. Maxaa keenay in ummadda isdagaalaan oo ay heshiini waayaan. Waxaan dhihi karnaa marka horre ma aysan helin cilmi celiyo, ma aysan ogaanin qiimaha dadnimada ay leedahay, ma fahansano habka ay dunidda horumar u taqaano. Horumarka saxda ah waa in maskaxda marka horre laga horumaro. Haddii shaqsiyan ahaan caqligaada iyo garaadkaada kordho waxaad gaartay horumar, laakiin garaadka iyo caqliga waxbo ma taro haddii aadan isticmaalin marwalbo.
Bulshada Soomaaliyeed waxay u baahanyihiin inay marka horre ka korraan maskaxda, sawabta kali oo ay u kori karaan ayaa ah in marka horre diintooda wax badan ka bartaan si la dhaqanka aadanaha iyo naftooda wax badan ugu ogaadaan. Diintaan waa diin Alle swc xagiisa noogu timid, waxayna faa’ido ugu jirtaa inay ku dhaqmaan dadkii loo soo dejiyay. Marwalbo aadanaha ay ka tagaan ku dhaqanka diinta waxaa ku adkaato fahanka nolosha iyo guud ahaan is fahandaro ka haysato bulshada iyo caalamka ay markaas ku dhex noolyihiin. Hadaba horumarka ayaa ah inaad marka horre ka horumarto maskaxda.
Haddii aad barato xirfad aad ku shaqeysani karto waxaad helaysaa inaad maskaxda ka korto oo kalla taqaano wixii kuu wanaagsan iyo wixii aan kuu wanaagsaneen. Cilmiga waa horumarka bulshada iyo garaadka dadnimada. Laakiin cilmiga aad ka doonayso inaad horumar ka gaarto waa inuu noqdaa mid hami weyn u hayso.
Waxaa la tilmaamaa dadka nolosha horumarka ka gaaray inay yihiin dad wax aqriskooda badan yahay. Waxaa la ogaaday dadka guusha ka gaaray nolosha ee dalka Mareykanka inay sanadkii aqriyaan 50 buugg, micnihiisa waa isbuuc walbo waxay aqriyaan hal buugg. Ma tahay shaqsi wax aqriyo maalintii 30 daqiiqo xittaa. Haddii aad wax aqriska ka dhigato saaxibkaa waxaa kuu suurta galayso inaad ka horumarto xagga maskaxda iyo inaad aqrini karayso wajiyada dadka iyo hababka ay u dhaqmaan.
Horumar lama gaaro illaa marka horre dadka ay ka horumaraan xagga maskaxda. Markaad fiiriso taariikhda bur-burkii ku habsaday ummada Soomaaliyeed waxaa hormuud u ahaa jahli. Qofka hadduusan aqqoon duruqsan u lahayn shaqada uu qabanayo waa dhib. Qofka injineerka ah waa inuu aqqoon fiican u leeyahay shaqada uu qabanaayo. Booliska xeran dharka ciidanka waa inuu aqqoon u leeyahay sawabta uu u xertay dharkaas. Siyaasigga Soomaaliyeed waa mid lagu keenay qabyaallad ee ma ahan mid meesha ku imaaday qaran jaceyl. Wey jiraan siyaasiyiin aqqoon fiican u leh shaqada ay haayaan, balse fikirkooda iyo afkaarta bulshada ay u siddaan waxaa ka hor joogo kuwa meesha ku joogo qabyaalad iyo waxwalbo oo Soomaali duleeyay.
Qofka siyaasigga wuxuu haayaa shaqo u baahan aqqoon iyo masuuliyadnimo. Haddii labadaas aysan jirin waxaa adkaani karayso inay noqdaan hogaamiyaal dadka ay ku dheefsadaan. Cidwalbo waa inay taqanaa shaqada ay haayaan. Ku dadaal cilmiga iyo wax aqriska si naftaada u horumariso. Haddii la doonaayo horumar marka horre aan ka horumarno maskaxda iyo caqliga. Dad badan ayaa ku mashquulsan jirkooda siddii ay u dhisi lahayeen. In jirka iyo muuqaalkaada qurxoon aad dhisto waa muhiim, balse ha hilmaamin inaad u baahantahay inaad iska horumariso xagga maskaxdaaada.
Next post Aafo "Fadlan Jooji Qaadka"
Previous post Waa Maxay Ganacsi?